Waa maxay Life ka Good? — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Waa maxay Life ka Good?
Haddii ay jiraan nooca kasta oo muusiko ah in uu had iyo jeer ka hadlayaan iyo dabagalka nolosha wanaagsan, waa hip-hop. Waan jeclahay hip-hop. Waxaan jeclaaday hip-hop naftayda oo dhan. Waxaa jira wax kaliya oo ku saabsan fuusto ah, iyo heesaha ee, iyo tamarta in uu mar kasta i seefteedii. Markii aan ahaa wiil dhalinyaro ah, markii aan ku jiray fasalka ama hurda - ama hurda fasalka - Waxaan maqlay heesaa aan jeclaa. Waxaan u soo deldeshaan ay eray walba loo isticmaalo, oo iyana waxay lahaayeen wax badan in la yidhaahdo. Waan ogahay heesaa ugu aan la isku dayayaan in ay noqdaan macallimiinta, laakiin in macnaheedu ma aha waxaan ahaa ma barashada. Waxaan si dhow ula dhageystay fikradahooda ku saabsan nolosha wanaagsan - oo waxaan jeclaa waxa aan maqlay.
Waxaan lahaa songs jecel sida "Money ma waa wax,"Oo waxaan maqlay albums la horyaal sida" Hel Rich ama dhinta Isku dayga. "Sidaas waxa run ahaantii ma aha wax lala yaabo in aan fikrad nolosha wanaagsan ahaa isagoo jeebka ah si cufan in ay ma uu doonaynin xataa dhow. Waxa aan ahaa oo dhan ee ku saabsan lacagta, in kastoo. Waxaan bartay oo ku saabsan hedonism, galmo caadi ah, Maadiga, irresponsibility, caajisnimada, daroogada, iyo helitaanka ixtiraam - oo dhan sida xabbadood in ay xujo ah in waa nolosha wanaagsan.
Oo dhibaatada ugu weyn ee la sawirka Waxaan helay nolosha wanaagsan ahaa in ay xuddun igu wareegsanaa. Waxaa jiray oo dhan igu saabsan. Sidee baan ku heli karaa lacag? Sidee baan ku heli karaa ixtiraam? Sidee baan ku heli karaa xaaladda? Sidee baan u ordi karaan dunida? Maxay ahayd in aan dhagaysto oo wax cunaya ahaa farabadan beenta. Oo markii dadkii dhallinyarada ahaa shid raadiyaha, inkasta oo ay jirto a badan hip-hop in codadka wanaagsan, aad u badan waxaa ka mid ah waxaa ka buuxa been ah oo ku saabsan waxa run ahaantii nolosha wanaagsan yahay.
Ha kastoo heli qaldan igu. Hip-hop music ma ahaa dhibaatada. Kuwa been badane Dambi badan ahaayeen. Sababta aan uweyneysay on hip-hop waa sababtoo ah waa aan dhaqanka iyo xaqiiqda. Waxaan laga yaabaa in la neceb yahay hip-hop, laakiin waxaan weli ayaa lagu quudin lahaa kuwa been saxda ah isla qof kale. Oo is-xuddun, wadnaha ammaan-gaajaysan iyaga cunay.
Laakiin markii aan la kulmay Ciise wax kasta bedelay. Waxaan la hor leh sawir cusub oo dunida oo sawir cusub ee nolosha. Oo sidaas daraaddeed waxaan ahaa on baaris cusub oo ay ku ogaado sida inuu soo nooleeyo wixii buuxa ku nool. Ma aanan rabin in ay nolosha ku nool yihiin iftiinka beenta dambe. Runtii waxaan rabay.
Haddii aynu sii wadno in ay aaminsan yihiin been ah oo ku saabsan sida aan u noolaan karaynaa, cawaaqibka waa weyn ee. Waxaan ma doonto in la nool qaar ka mid ah doorasho kale; waxaan doono aan la nool habka aan la abuuray si ay u. Waxaan lumin doonaa nolosheena dabagalka walax in macno ah ma. Waxaan ka maqnaan doonaa sawirka wayn. Ma la kulmi doonaan farxad iyo qanacsanaanta run. Ma noolaan doonaa sidii aan u abuurmeen in ay ku noolaadaan. Ma noolaan doonaa nolol wanaagsan.
Dabcan Kitaabka marna wuxuu erayga "nolosha wanaagsan." Laakiin marka aynu nidhaahno "Nolosha wanaagsan" waxaan inta badan macnaheedu nooca ugu fiican ee nolosha aan ku noolaan karaan. Sidaas waxaan doonayaa in aan ka heli at nooca ugu fiican ee nolosha kitaabku yahay. Waxaan doonayaa in aan na in ay ku noolaadaan sida aanu u abuurmeen in ay ku noolaadaan. Sidaas waxaan doonayaa in aan eegno saddex waxyaalood oo nolol wanaagsan yahay.
waxaan. Life The Good waxaa noolaanshaha By Faith In Ilaah Good
In buugga waana sida aan u qeexo nolosha wanaagsan. Nolosha rumaysadka Ilaah wanaagsan. Oo ha i sababta aad u sheegto.
WAXAAN ALL ku noolahay rumaysadka
Haddii aan oga ama ma, oo dhan oo naga mid ah waa dad ka mid ah iimaanka. qabka kasta aadanaha. Masiixiyiinta ah, Muslimiinta, Lahore, budista, Agnostics, Cawaan - oo dhan oo naga mid ah ku noolahay rumaysadka, waxaan ku nool nahay light of waxa aan rumaysan nahay in daqiiqad kasta siiyey. Kuwa idinka mid ah waa ciyaartoyda ku dhaqmaan runtii adag. maxaad? Maxaa yeelay, aad aaminsan tahay waxa aad ka dhigi doonaa fiican ee aad cayaaraha (haddii aad i sii kordhaya ciyaaro kubada kolayga iyo weli isagoo aad u xun). Ama qof sidee ku saabsan this. Qaar ka mid ah oo idinka mid ah ku riday cinwaanka in Maps Google in ay halkan ka heli maanta. maxaad? Waayo, waxaad rumeysan yahay in aad telefoon ku siin lahaa tilmaamaha xaq u. Haddii aad rumeysan telefoonka kugu khayaanaan lahaa, oo waxaan u malaynayaa in mararka qaar anigaa sameeya, aadan lahaa ayaa waxa loo isticmaalaa. Waxaan on iyo tegi karin. Laakiin dhammaanteen innagoo aan ku noolahay rumaysadka.
Waxaan ka hadlaan arrintan kitaabka. aad u xun oo la tilmaamo waxaan ahay. Xaaskeyga waa si joogto ah la yaabay sida carrab la 'Waxaan la tilmaamaha ahay. Mid ka mid ah waqtiga ayaan tegey, oo intay galeen galo si uu u noqon, laakiin markaas waxaan dib u soo baxeen si la mid ah. aad u xun. Waxa ay noqon doontaa mid aad u carrab la 'inuu i aamini in aad u horseedi. Sidoo kale, oo dhan oo naga mid ah waxaa dhacday. quluubtanadu waxay noo kaxayn jiho qaldan. Markaasaa Ibliisku wuxuu noo cunaa been, adduunka ku qaybiyaa, iyo qalbigayaga iyaga cuna. Sidaas halkii jidaynayey qalbiyadeenna na hanuunin, waxaan u baahanahay inaan ku noolahay rumaysadka runta.
Oo mid ka mid fiican inaad noo sheegto oo ku saabsan sida ugu wanaagsan ee ku nool nolol tan waxaa Ilaah naftiisa. Annagu ma ahan oo keliya sugi inuu hoos u sharrax ka Jannada; aynu eegno waxa uu hore u sheegay in. Our dhibaato waa waxaanu u rumayn beenta ee cadowga runta Ilaah.
Ilaah wuxuu abuuray Aadan iyo Xaawo. Oo wuxuu iyagii siiyey tilmaamaha sida in ay ku noolaadaan. Waxa uu sheegay in ay cuni kari geed kasta oo ka, marka laga reebo geedkii aqoonta wanaagga iyo xumaanta.
Haddaba abeesadu way ugu more khaa'inka badnayd bahal kasta ee kale ee duurka jooga oo Rabbiga Ilaah ahu sameeyey. Wuxuu naagtii ku yidhi, "Ma Ilaah run ahaantii odhan, 'You Waxba ka cunin geed kasta oo garden' ah?"Markaasaa naagtii waxay abeesadii ku tidhi, "Waxaa laga yaabaa inaan ka cunin midhihii dhirtii beerta, laakiin Ilaah wuxuu ku yidhi, 'You Ma cuni doontaan midhaha geed ku jira beerta dhexdeeda ku, ama aydnaan taaban doonaa, waaba intaasoo aad die.' "Laakiin abeesadii naagtii ku yidhi, "Ma dhiman doono. Waayo, Ilaah wuxuu og yahay in maalinta aad cuntaan ay indhihiinnu furmi doonaan,, oo aad noqon doontaan sida Ilaah oo kale, garanaya wanaagga iyo xumaanta. "Sidaas darteed, markii naagtii aragtay in geedkii cunto ku wanaagsan yahay, iyo in ay ahayd a waxay jecel yihiin inay indhaha, oo uu yahay geed ahaa in la doonayo in caqli lagu, ayay midho ka qaadatay oo uu u cunay, oo wax bay ka siisay qaar ka mid ah si ay ninkeeda oo iyada la jiray, oo isagiina wuu cunay. (Genesis 3:1-6 ESV)
Aadan iyo Xaawo waxay rumaysteen been abeesada badan, runta Ilaah aawadeed. Tani waa dhibaato wayn iyo sidoo. Waxaan aaminsan nahay dunida, markay noo sheegto inay wax ka wanaagsan in ay bixiyaan ka badan Ilaah. Waxaan aaminsan nahay xagga jidhka ah marka ay inoo sheegayaa in ay eegaan in website. Waxaan aaminsan nahay Ibliiska markii uu sheegay in aan ka joogno arinta xarunta of caalamka. Waxaan aaminsan nahay kuwa beenta halkii runta Ilaah. Iyo in waxa naga horjooga nolosha wanaagsan.
Nolosha wanaagsan bilaabmaa marka aan dembiyadeenna u noqon, waxaan go'aansaday inuu gadaashiisa kaga tegi doono oo dhan of our caasinnimada, oo aan rumaysadka ee Ciise. Taasi waa marka nolosha runta ah bilaabmaa. Laakiin rumaysadkeenna ma waxaa la joojiyo. Waxaan leenahay si ay ula dagaalamaan maalin kasta si ay u sii wadaan in ay ku kalsoon tahay Ilaah oo isaga rumaysan badan ee beenta cadowga.
Rumaysadkiinnu waa DAGAALKA KA AH MAALIN WALBA
Waan ogahay in aan halkan dembilaha kaliya caawa ma ihi. Oo inta badan aanu u marka aan dembaabo,, waxa kaliya sababtoo ah waxaan lahaa la joogo oo itaaldarradii. Laakiin ma ahan sheekada oo dhan. dhibaato dembi kasta waa dhibaato iimaan. Waxaan dembaajiyey rumaysaddarro aawadeed. Waxaan aaminsan nahay beenta cadowga oo ku adeecin halkii runta Ilaah.
Sidaas marka aan Caasiya xujo, waa sababta oo ah waxaanu u rumayn been ah in hey'adda ay jirto in aan nagu dhibaysaan na caawi. Waxaa kale sababtoo ah waxaan Ilaah ma rumaysan markii uu sheegay in uu u saaray amar meel aannu wanaaggayaga aawadiis. Oo markii aannu galmo guurka ka hor, waa sababta oo ah waxaan been u rumaystaan ​​ah, in ay sida ugu fiican ee nafteena ku raaxaysan. Waxaa kale sababtoo ah waxaan Ilaah ma rumaysan markii uu sheegay in galmo waxaa loogu talagalay is qaba, iyo in macnaha halkaas oo ay si hagaagsan u riyaaqay.
In Romans 1, Paul ayaa sheegay in uu ka shaqeeyo inuu keeno ku saabsan "addeecidda rumaysadka" - addeeco in la barwaaqaysan oo rumaysad ka timaada in Ciise. Sidaas sida aan u dagaalamaan in iimaanka? Sidee aynu Rumaysad noo quudiyaan?
WAXAAN U BAAHANAHAY ereyga Ilaah
Romans 10 ayaa sheegay in, "Rumaysadku wuxuu ka yimaadaa iyada oo dhagaysiga, iyo maqalka iyada oo hadalka Masiixa. "
Our nolosha ruuxiga ah bilaabmaa iimaanka ee Word oo sii soconaya, iyadoo la mid ah. Laakiin maalin kasta waxaana lagu waaleen been ka dunida, jidhka, iyo xaqa Ibliiska? Sidee aadan dagaalamaan been? Iyada oo runta! Sidaas halkan tusaale u ah sida loo isticmaalo erayga Ilaah. Maalin kasta waxaan maqli farriimo ku saabsan galmada, waaleen sanamyadooda Caa'isha, iyo qalbigayaga dembi miidhan jecel nahay in oo rumaysan been kuwa. Sidaas awgeed, waxaan u dagaalami been Xaq kuwa. Maxay erayga Ilaah leeyahay oo ku saabsan sinada?
Waayo, tanu waa doonistii Ilaah, inaad quduus: in aad sino ka fogaataan; in mid kasta oo idinka mid ah ku gartaan si loo xakameeyo jidhkiisii ​​quduusnaan iyo maamuus, mana aha inuu hammadda damaca xaaraanta sida aan Yuhuudda ahayn oo aan Ilaah aqoonin. (1 Tesaloniika 4:3-5 ESV)
Waxaan nahay sida baabuur. Waxaan ku ordi ka mid ah maalin kasta gaaska. Si aad ku sii jirtaan iimaanka socda, waxaan u baahan nahay shidaalka. shidaalka, taasina waa Ereyga Ilaah. Haddii aadan haysan waxaan shidaalka oo aynaan ka sii wadi doonaa in isaga isku halleeya. Ma aha in la yidhaahdo haddii aan ma akhriyo Word hal maalin ah waxaan noqon doonaa cawaan marka aan toos. Laakiin markii aan ahay in hadalka, Waxaan dareemi. Waxaan dareemayaa rumaysaddarradoodii ku jiidhaya baxay iimaanka in meelo kala duwan oo noloshayda.
Oo waxaannu ha la diririna, waayo, rumaysad in Word oo keliya. Waxaan u baahan nahay dadka Ilaah.
Laakiin idinku waaninayaa hal maalin kasta, ilaa iyo inta waxa loo yaqaan "maanta,"Ma jiro in aad ku engegin khiyaanada dembiga. (Cibraaniyada 3:13 ESV)
Waayo, kuwa naga mid ah ee qolka this caawa Kuwaasaana ah Mu'miniinta, waa maxay xiriirka aad sida la Masiixiyiinta kale? Ha kaliya aad ka qayb kaniisadda ama aad waqti fiican dadka kale ku qaataan? Waxaan u baahanahay inaan si dhab ah ula socdaan Masiixiyiinta kale. Waxaan u baahanahay in ay xiriir dhow. Waxaan kasta oo kale oo la xisaabtanka u baahan tahay. Markii aan shukaansi xaaskeyga, wax weyn waxaa dadka noloshayda haysta ii xisaabtamaan xuduudihii.
Haddii aad rumaysadkiinnu ku riday Masiix, uma baahnid inaad si loo siiyo in. Waxaad la sii daayay. Oo markii aad ku socon xoriyadda in, waxaad awoodi doontaa in ay helaan nolol u noqon doonaa sida la micno ahaa in la riyaaqay. awoodaan in ay ku noolaadaan sida aanu u abuurmeen in ay ku noolaadaan Waxaad noqon doontaa.
Sidaas daraaddeed waxaan u dagaalanaa inaan rumaysadkiinna, laakiin waxa falaa Eebe adeeca, eegno aamin nolosha sida? Maxay u eg yihiin marka aan ku noolahay rumaysadka xagga Ilaah ku fiican?
II. Life The Good ku dhisan tahay Ciise
Waxaa jiray wax aan akhriyey hore sida isagoo Masiixi ah in duminayo aan sawir jir ah oo nolosha wanaagsan. Halkan tusaale.
Dhimashaduna waa ii faa'iido
All oo naga mid ah ayaa wuxuu maqlay dadkii oo ka hadlaan geerida waqti ka waqti. Waxaan maqlay dadkii odhan, "Waxba nolosha waa aamin, dhimasho mooyaane, iyo canshuuraha." Mid ka mid ah heesaa caan ah ayaa sheegay in, "Waxaan isku dayayaa inaan ku garaacday nolosha 'sabab uma aan khiyaameeyaan kartaa dhimasho." Dadka fahamsanahay in dhimashada aan la baajin karin. Laakiin sida da'da yar Christian a, Waxaan akhriyey aayaddan ku saabsan dhimashada ee Kitaabka Quduuska ah in ay ahayd sida wax aan abid maqlay hor. Rasuul Bawlos wuxuu la hadlay oo ku saabsan dhimashada hab la yaab leh. Bawlos oo kaliya ma dhihi dhimashada dhawr, uu tallaabo dheeraad ah ku qaatay. Waxa uu sheegay in, "Dhimashaduna waa ii faa'iido." Waxa!?
Dhimashada waa marka aad maskaxda, qalbigaaga, iyo sambabadaada joojiyaan shaqadooda. Dhimashada ka dhigan gabagabeeyo nolosha iyo kala xubnaha qoyska. Dhimashada ka dhigan tahay shaqo aad nolosha ka weyn tahay. Si ka duwan tijaabooyin kale, dhimashada waa, qofka dhinto, macno ahaan "dhamaadka dunida" - dhamaadka this mid kasta. Sidaas sida dhimashada suurto gal noqon karaa faa'iido? Waxaan lacag ma ka dhigi kartaa markii aan dhiman? Anigu ma kordhin kartaa xaaladda aan markii aan dhiman. Waxa kaliya ma ku haboon la views my jir ah oo nolosha wanaagsan.
Well si hagaagsan ha iigu in la fahmo waxa loola jeedo Paul, kuwaas oo afar erey - "dhimashaduna waa ii faa'iido" - Waxaan u lahaa in ay fahmaan in afar xaq u timid iyaga waxaa u horreeyey. In Philippians 1 Paul sharaxayaa sababta uu u muuqataa in ay OK la mid sii joogi nool ama u dhimanayaan at gacmaha silcinaya uu. Waxa uu ku qoray aayadda 21, "Si aad ku nooshahay waa Masiix. "Iyada oo erayada kuwa, Rasuulka ii sheegay waxa nolosha runtii wuxuu ku saabsan yahay oo dhan - ma lacag, shaqadeyda ma, xitaa ma qoyska - laakiin Ciise. Sidee is-xuddun yaabaa, xaaladda-Waali aragtida soo socda si dhab ah in ay u noolaadaan?
BAWLOS EE jaceeylka
Waxaan ogaaday in ciyaartoyda ugu guulaha badan sport kasta, Kooxda heysata horyaalka ah, oo dhan waxay leeyihiin wax caadi ah. Waxay leeyihiin maskax mashquul ah la guuleystay. Oo jaceeylka, this rabitaan qoto dheer inuu ku guuleysto, trumps oo dhan waxay doonayeen kale ay ciyaarta. Sidaas daraaddeed waxay ku aadan inta badan ka walaacsan Soomaali ah, ama duntu highlight ah, ama kursiga stats ay. Sida xaqiiqada ah waxay u malaynayaan in ku saabsan alaabtii, laakiin dhamaadka maalinta, ma ahan waxa ay u ciyaaro. Waxay u ciyaarnaa inaan badino. Sidaas darteed haddii ay haystaan ​​fursad ay in talo galay, laakiin ma kooxda, waxay noqotay. kaliya ay doonayaan in ay ku guuleysato.
Well in ay la kulan sports. Aan ka fikirto nolosha. In nolosha, wax Paul waxaa Waali. doonayay in trumps oo dhan waxay doonayeen kale. hamiday in baddelo oo dhan ee uu damacyo kale oo ah Masiixa. Ma ahan in uu naftiisa ku nebcaadaase,, ama qoyska, ama waan qalbiqaboojin; waxa kaliya in Ciise cisaynayo oo waa wayn. Waa waxa ugu muhiimsan. Iyo in ay cadahay waxa uu qoray in marinka.
Paul ayaa sheegay in Philippians 1, si uu u noolaado ama dhiman; oo wuxuu ahaan lahaa wanaagsan, waayo, Ciise waa la murwayn lahaa. Oo aayadda 21 na sababta sheegayaa. Waxa uu fahamsan yahay wax. Si aad nolosha ii ah Masiixa. Life waa Masiixa. Waxaan la abuuray by Ciise iyo Ciise. Ciise waa Badbaadiye ah naxariis kuwaas oo meesheenna istaagay oo ku yaboohaya nolol cusub. Ciise waa dhexdhexaadiyaha Aabbeheenna hortiisa. Ciise waa in uu ahaado dhiirogelin ka dhammaan go'aamada our. waa Ciise noqon ciidanka wadista ka dambeeya noo dhaqdhaqaaq kasta oo. Waa ALL ku saabsan Ciise. Waxaa jira nolol wanaagsan ma marka laga reebo Ciise, maxaa yeelay, iyada oo aan Ciise nolosho macno lahayn. Si aad nolosha ii ah Masiixa.
Your nolosha ma aha adiga kugu saabsan, laakiin ku saabsan Ciise. Sidaas this badala sida aan aragno wax walba oo.
Maxaa ku saabsan riyooyin iyo gool our? Waa in aad leedahay riyooyin weyn oo gool weyn, laakiin ay tahay in la xuddun on Ciise. Waxaan la abuuray si ay ugu noolaadaan si isaga muujinaysaa in ay qofka uu yahay. Paul ayaa sheegay in Philippians 1 in haddii uu ku nool yahay ee jidhka ay ka dhigan tahay midhaha hawshayda, isaga, waayo,.
Hawshoonaya, waayo, Ciise
Waxa ay i xasuusineysaa sheeko funny. Mid ka mid ah waqtiga, Waxaan ku jiray Dallas oo anna waxaan ku tegey mid ka mid ah aan jeclaa dhibco digaag la shiilay, William ee Chicken. Adeegga had iyo jeer waa u xun, laakiin digaagga waa si wanaagsan. Drive adeegga ahaa xun, laakiin markaas waxaan u helaysaa in aad hore. Waxa uu off dhabarka hadalka iyo baan ka heli uu dareenka. Oo isna wuxuu sheegay in, "Oh, ii xun inaan halmaamay ku saabsan aad Bro. "Maxaad samayn macnaheedu halmaanteen? Waxaad tahay shaqada! Taasi waxa aad sameynaysid shaqada. Sidee ayaad u illoobin in ay ka shaqeeyaan? Waxa uu helay wareeri.
Sidoo kale, in kastoo, waxa aan si fudud loo jeedin. Waxaan iloobin waxa aan halkan ku soo saaray in ay sameeyaan. Oo annaguna waxaannu ma tahay dareen ah oo ku saabsan u hawshoonaya, isaga, waayo,, sidaas oo ah waxyaalaha dhaldhalaalaan dunida leeyahay in ay bixiyaan naga soo jiid.
Hawshoonaya, Masiixu wuxuu u dhan u baahan in ay wacyigaliyo aan macnaheedu ma aha. Waxaan u baahanahay qareennada, heesaa, xoghayayaasha, mudalabyada, iyo maareeyayaasha kaydin jiray oo uu jecel Ciise. Haddaba waxaa macnaheedu ma aha waxaan oo dhan mari lahaydeen ka Dooriyaan wax aynaan ama u furan tahay in ay sameeyaan, inkasta oo waxaa laga yaabaa in Doono. Waa maxay waxa ay dhab ahaantii ka dhigan tahay waa, si aynu u yaqaanaan waxa Ilaah wuxuu inoogu yeedhay oo u samaysaan sida Mu'miniinta, iyo ogaado sida ay u shaqeeyaan in ka soo xaaladaha our u gaar ah. Waxay u ekaan doonaa kala duwan ee noloshooda kala duwan, laakiin waxaan u samayn karto si aad Ammaantiisu.
Waan ogahay daaciyiinta qaar ka mid ah marinnada ay isticmaalaan khalad, in ay naga dhaadhiciyo in ay jiraan tijaabooyin lahayn. In ay view nolosha wanaagsan inoo diyaar ah oo ku jira Masiix waa nolol xor ka ah wax kasta oo tijaabooyin hadda. wax walba waan ku samayn karaa - waxa aanu run ahaantii ka dhigan tahay? Xataa in kastoo aan nuugi ee basketball, Masiix waxaan noqon kartaa NBA-star oo dhan? No, Paul ahaa ku yidhi haddii aan hodan yihiin ama faqiir ahay, Waxaan content ahay. Maxaa yeelay, waxaan u leeyihiin Masiixa.
Ilaah la mid ma aha qaar ka mid ah hooyooyinka iyo aabayaasha dunida jooga oo aan naga aqbali doono haddii aan nahay sare ee sallaan shirkadaha. Eebana ma dalban status, wuxuu dalbanaya aaminnimadaadana.
Waxaan loolan markii aan akhriyey erayadii Paul ee, gaar ahaan anigoo eegaya xaaladda Paul ee. Paul waa dhexe ee xaalad xun. Laakiin siku uu u arko iyada oo loo marayo isbedel wax walba oo. Si aad ku nooshahay waa Masiixa la siku, wuxuu arkaa in uu maxkamad iyada oo loo marayo.
Mararka qaarkood waxaan ku tuuraan taam ah sida ilmo yar oo ku dhex jira oo ahaa jirrabyadii, sababtoo ah waxaan qabaa in xaalad kasta waa nagu saabsan. Waxaan qabaa, waxaana ka caban in saaxiibadeena, ku saabsan sida aan cadaalad ahayn waa, iyo siday ugu adag tahay. Waxaan ku Tuuraynaa koray katuurka sababtoo ah waxaan qabaa in xaaladaha our ugu dambeyntii waa ku saabsan noo isagoo raaxo. Laakiinse iyagu ma ay tahay. Waxay tahay oo ku saabsan Ciise. Waxaan leg danto lahaa iyada oo tijaabooyin kala duwan, haddii halkii diiradda saaraya sida raaxo waxaan nahay waxaan diiradda saari doono sida loo sharfo Ciisena dhexda ah. Taasi waa nolosha wanaagsan.
Ma dhismaha nolosha ku wareegsan Ciise ka dhigan tahay in ay tahay in la caajiso ama aan farxad? Dabcan maya. Waan ogahay been ka muuqan kara soo jiidasho mararka qaarkood, laakiin runta waa waa dhamaadka a dhintay. Waxaa la toogtay aad u hooseeyo. Ciise Kadib macnaheedu ma aha waxaan ma ku raaxaysan waxyaalaha, waxaa kaliya la micno tahay inaan iyaga xaq u raaxaysan. Halkii taasoo keentay in jabka ay keeni farxad dheeraad ah.
Wax walba waa ka wanaagsan marka riyaaqay ee macnaha guud waxaa loogu tala galay in uu ahaa. Saaxiibtinimada waa ka badan raaxo leh marka la dhisay isaga ku wareegsan. Laba qof cafiyan cafi kasta oo kale oo, taas oo ka dhigaysa macaan saaxiibtinimo. Waxaad la sii daayay karaan inay ku raaxaystaan ​​lacag, marka aad u sujuudi weydaan.
Farxaddii ma socon. Kuwa la dhiso ay nolosha ku wareegsan wax falayaal isu qotomiyey Halaag. Laakiin kuwa ku dhisi lahaayeen nolol agagaarka Masiix weligeed la baabbi'inayn karaa. Waa hadiyad ka timid Ilaah iyo waxa aan la qaadi karo.
Sidaas awgeed, waxaan ku leeyihiin qaar ka mid ah faahfaahinta ku saabsan nolosha wanaagsan, laakiin halkaas ayay ka yimaadaan? Sidee aan u heli?
III. Life The Good waa hadiyad ka timid Ilaah jecel
Ilaah doonayo in aad ku noolaadaan nolol wanaagsan. Isagaana idin abuuray in ay ku noolaadaan nolol wanaagsan. Our dembi waa wixii naga dhawray ka. Been The ayaan waxaan loo sheegay waa in Ilaah oo doonaya inay na ilaaliyaan nolosha wanaagsan. Sida uu noo doonayo inuu niyadjabsan oo ka maqnaan doona on farxaddii oo dhammuna. Laakiin taasi waa doqonimo.
Wuxuu nagu jecel yahay wax badan in kastoo aan dembaabay oo la kala Xaggiisa, Waxa uu Ciise u soo diray si ay noo si ay u leedahay. Waxaan ka go'een Ilaah, isha dhammaan wanaagsan.
Waxaa jiray kala duwanaansho badan oo u dhexeeya sawirka nolosha wanaagsan ayaan ka bartay Paul, iyo sawirka aan ka bartay dhaqanka. Laakiin mid ka mid ah kala duwanaanshaha weyn waa sida aynu halkaa gaadhno. Duniduna waxay noo iibiya ah "nolol wanaagsan" in aan si ay u helaan. Oo xataa qaar ka mid ah kuwa ka shaqeeya adag si ay u gaaraan, waxa wali aan gaarin. Laakiin sawirka Kitaabka Qudduuska ah "Nolosha wanaagsan" waa ka duwan yahay. Waa hadiyad lacag la'aan ah in ay heli karaan dhammaan.
Waayo, nimco aad uu badbaadeen xagga rumaysadka. Oo tanu ma aha shuqulka u gaar ah; laakiinse waa hadiyadda Ilaah, ma ay sabab u ahayd shuqullo, si aan ninna ugu faanin. (Efesos 2:8-9 ESV)
In John 11, Ciise wuxuu ku yidhi, "Anigu waxaan ahay sarakicidda iyo nolosha. Kii i rumaystaa,, in kastoo uu dhinto, wuu noolaan doonaa, iyo qof kasta oo nool oo i rumaystaa weligii ma dhiman doono. "Taasi waa war wanaagsan.
Ciise galitaanka waxay ka dhigan tahay waxa aan soo celiyo oo ay Ilaah u, oo waa war la yaab leh sababtoo ah waxaan ka dhigay inay Ilaah ku raaxaysan. Waxaan u hesho in ay hadda isaga raaxaysan in Kalimadiisii. Waxaan jecel daawashada ciyaaraha, iyo qaab weyn sababtoo ah waxaan ku raaxaysan weynaanta. Waxaa jira weynaanta aan ka badnayn Ilaah ee ah Kan Abuuray. Weynaantiisa dhigaysa kooda eegto raxiimka.
Tani waa sababta Paul odhan karaa "dhimashaduna waa ii faa'iido,"Sababtoo ah hadii uu ku dhintay ama ku noolaa, Ciise waa la murwayn lahaa. Life la micno ah inuu helo si uu ugu adeego Ciise iyo dhimashada la micno ah inuu helo si ay ula Ciise noqon - oo ma jirto meel uu halkii noqon lahaa (Filiboy 1:23). Waxaan baran karaa Paul halkan. Runta waxa ay tahay, waxaa dhaanta inay noqon wasakh saboolka ah ee joogitaanka Ciise ka badan in laga sii dhigo hodan ku ah jiritaanka dadka.
aad u dheer Ha inay Ciise la noqon? Waxaan marnaba in la yidhaahdo dhimashaduna waa ii faa'iido awood u yeelan doonaan, ilaa aan run ahaantii jeclahay Ciise. Isaga ha ku jeclahay in ka badan nolosha this? Sabuurradii 73. Sida kaliya ee ay halkaas ka heli waa by fiirinaya isaga at in Ereygiisa iyo jeestay waxyaalaha in alla intii daruurtu Riyadaada. Qaar ka mid ah oo naga mid ah la yaabanahay sababta aan ma Ciise jecel more, laakiin waxaan ugu cuslaataan wax na sii ka soo dhawaataan isaga la. Noqda oo ay maamulaan Xaggiisa. Taasuna waa wax dagaal ah oo iimaanka.
Waxaan ku noolaan karaan sida aan u abuurmeen in ay ku noolaadaan.
Haddii aanan arag brand sawir cusub ee nolosha wanaagsan waxaan khasaariyey lahaa dabagalka nolosheyda ka dib markii walax in macno ah ma. Laakiin by nimcada Ilaah i tusay kuwii afar erey: in ay ku noolaadaan waa Masiixa. Oo haddana wuxuu i siiyey nimco ku noolahay rumaysadka xagga Ilaah ku fiican.
waa wanaagsan yahay, maxay? Yaa qeexayaa wanaagsan? Ilaah ma. Good cisaynayo Ciise iyo isaga la. Ilaa iyo inta aan rumaysan been ku dhaqanka ii sheegay, Waxaan ahaa ma ku nool nolol wanaagsan. Laakiin markii aan bilaabay inaan ku noolahay rumaysadka xagga Ilaah ku fiican, nolosheyda wanaagsan bilaabay. Waxaan bilaabay in ay arkaan nolosha wanaagsan sida nolol cusboonaaday Ciise, kexeeyey Ciise, oo ku noolaa in ay ammaanta Ciise. Ninka oo ku nool nafsaddiisa waxba waarta helo nolosha this, oo isna wuxuu la kulmi doonaan oo kaliya khasaaraha ba'an ee soo socda. Laakiinse ninkii oo ku nool Masiix waayo, haatan helo dhadhan nololeed wanaagsan, oo uu dhintay oo keliya isaga Bixiya waxa uu doonayo ugu.
sheyi • August 20, 2013 at 11:39 pm • Reply
barakada A weyn ayaa ii. Rabbigu wuxuu uun u jawaabay baryadayda. Aamiin
Bman • November 15, 2013 at 2:00 waxaan ahay • Reply
Tani ayaa runtii ahayd furitaanka isha .thnx